GIS nyiwe, ndị na-uru? - Geofumadas
Nọvemba, 2007 ArcGIS-ESRI, Cadcorp, Geospatial - GIS, Google Earth / Maps, manifold GIS, Microstation-Bentley
O siri ike ịhapụ ọtụtụ nyiwe nke dị, ma maka nyocha a, anyị ga-eji ndị na-adịbeghị anya Microsoft weere ndị ha na ya jikọrọ na SQL Server 2008. Ọ dị mkpa ịkọwa oghere a nke Microsoft SQL Server na ndị mmekọ ọhụrụ, ebe ọ na-enye ohere njikwa data gbasara ohere gbasara ụzọ; nke a tupu anyi enwee ike ime ya Ọnọdụ Ọhụụ… N'ezie na-akwụ ụgwọ kwa afọ $ 30,000 maka akwụkwọ ikike kwa afọ. Ohere a na - eme ka SQL Server sie ike ka ụlọ ọrụ nwee ike mepee na katrij a na - enweghị ngwa etiti ma ọ bụ ihe ọghọm nke ịla n'iyi n'etiti ihe na - arụ ọrụ nke ọma na ihe ndabere anyị.
Ka anyị nyochaa ụfọdụ n'ime ndị a SQL Server 2008 mmekọ:
Nke a bụ ụlọ ọrụ teknụzụ GIS a kacha mara amara n'ụwa niile, ahịa ya kwa afọ karịrị $ 660 nde na ebe ọ bụ na nsụgharị 3x oge ochie ọ gbasiri ike ruo n'ókè ọ ka na-eji ya na ọkwa desktọọpụ na ESRI ka na-enye nkwado maka ngwaahịa ndị a. Ọzọkwa, ESRI na-enye nnukwu ụlọ ọrụ na ndị nnọchi anya mpaghara ọrụ nkwado, ọzụzụ na ire ngwaahịa, n'ozuzu ha nwere otu mba na steeti, n'agbanyeghị na ngwaahịa ha dị ugbu a ọ bụghị naanị site n'aka ndị nnọchi anya gọọmentị.
Ngwọta ndị a siri nnọọ ike, ọ bụ ezie na ọ dị ntakịrị mgbagwoju anya iji ghọta ngwugwu ikpeazụ maka atụmatụ mmepe site na ọtụtụ ngwa sitere na igbe na n'ime ogwe.
Ụdị nsụgharị mbụ dị mgbe niile ARCview 3.20 Ọ na-aga maka $ 750 ọ bụ ezie na ndị a na-apụ n'anya kwa ụbọchị n'ihi oke data dị na ya. Ọ bụ mmadụ ole na ole nwere obi ike ịzụlite ngwa, ha na-ejikarị ya arụ ọrụ maka desktọọpụ.
Mgbe ndị gara aga bụ ngwaahịa kachasị eme ihe ARCAG desktọọpụ, nke a na - akpọ ARCmap nke na - agagharị maka $ 1,500 maka pc na $ 3,000 na ikikere floating, dabere na mkpa a na - azụta ndọtị ahụ.
Mgbe ahụ, e nwere ARCeditor nke na-aga site na $ 7,000
Y ARCserverNke ugbu a na-agụnye ihe ndị ArcIMS ($ 12,000), ArcSDE ($ 9,000) na MapObjects ($ 7,000), ndị a ugbu a na a ArcServer eri banyere 35,000 ... anya $, kwa processor pụtara na ọ bụrụ a nkesa nwere ihe abụọ processors na-eri $ 70,000
Ewezuga na enwere ọtụtụ ngwaọrụ, nkwụsị na nsụgharị ahaziri iche maka mkpa ọ bụla.
Otu n'ime uru kasịnụ dị mfe n 'ịchọta ndị ọrụ pụrụ iche ma ọ bụ ndị ọrụ n'ihi mgbasa ama ewu, ọ dịkarịa ala maka ngwa desktọọpụ; maka mmepe, mkpanaka ma ọ bụ weebụ ị ga - eme ka ọchụchọ ahụ dịkwuo ike ọ bụ ezie na ndakọrịta ya na mmepe mmepe na data DBMS na - eme ka ihe dị mfe. Ọrụ data na-adịkwa n'ụwa nile, ọ bụ ezie na ụbọchị ọ bụla, ntanetị ndị ọzọ nwere ike jikọọ na ọrụ ndị a.
Kọmputa Aided Development Corporation Limited (Cadcorp)
A na-eji ngwaahịa ndị a eme ihe na Europe, a mụrụ na England, mana ugbu a, ọ na-abanye na ahịa nke North America, karịsịa United States na Mexico nke a dị mma n'ihi na ọ na-egosi nkwado na caliche Asụsụ Spanish. Cadcorp na-akwado nkwado OGC, na-eme ka ngwaahịa ya kwekọọ n'ụkpụrụ ndị a.
Fọrọ nke nta ya niile na-na-na C ++ asụsụ, ọdịdị ya bụ nnọọ yiri Windows ihe na-eme ka anyị enyi na enyi na scalable ngwaahịa ndị doro anya, ọ dịghị ihe ọzọ nwere ike ịbụ serparar isi ọrụ nyiwe:
Onye na-ekiri eserese eserese, Onye njikwa Maapụ, Onye ndozi Maapụ na Kachasị Modeller Ahịa nwere ike ịdị site na $ 1,500 ruo $ 4,000 dabere na onye na-ere na onye zụrụ ya; ).
mgbe ahụ, enwere usoro nhazi
CDM Modeller, CDM Manager na CDM Viewer, ahịa nwere ike ịgba ọsọ maka $ 7,000 maka nke ọ bụla na site na programmer
N'ihe dị elu karị bụ ihe Develloper na kpochapụwo, Enterprise na Web versions.
Ọ bụ mbido na nso nso a, mana nwere ikike pụrụ iche. Companylọ ọrụ a ga-abụrịrịrịrị ndị a mụrụ site na otu gurus nke mbara ụwa ndị chere na «esi mee ngwá ọrụ na-eme isi ihe maka a «, Ma mepụtara a scalable ngwaahịa.
Na mbu o yiri ka ọ bụ aghụghọ, iche na ngwá ọrụ maka $ 245 ka ha wee nyeghachi nkwụghachi ma ọ bụrụ na enweghị afọ ojuju na ụbọchị 30. Thezọ ha jisiri ike belata ụgwọ ma ọ bụ opekata mpe ihe m chere bụ na ha anaghị ere ngwaahịa igbe, mana ziga igodo ọrụ, enweghị akwụkwọ ntuziaka ma ọ bụ dijitalụ, ha enweghị ndị na-ere ahịa, a zụrụ ya ozugbo yana naanị n'ịntanetị. Ihe ndị a bụ akụkụ nke na-ewepụ uru gị na ọkwa nkwado mpaghara, ma bulie ikike maka ndị nwere ike ịnye ọrụ ndị a (mmepe, mmejuputa na nkwado). Ihe kachasị ịtụnanya bụ otu ha si ejikwa ikike, ndị mmadụ a ga-ebu ụzọ hazie sistemụ ikike na usoro azụmaahịa hehe. Na njedebe, ọ dịghị ihe ọzọ karịa ire 5 arụ ọrụ na ọnụ ala, na-eche na n'ime afọ abụọ ọ bụla ikpo okwu kọmputa ga-adịkwaghị aga, yabụ mgbe ụdị ọhụrụ ahụ pụtara, ha na-ere mmeghari ikike maka $ 50, mana 5 niile na-arụ ọrụ ọzọ akwụkwọ ikike ... na-atọ ụtọ, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị aghọta na ESRI ama ama na Latin America mana ọtụtụ akwụkwọ ikike ezuru.
Manifold nwere ụzọ bara uru nke ịlele ngwaahịa ndị a, ọ bụ ezie na ihe kachasị mma bụ na otu ngwaahịa ahụ nwere API iji nwee ike ịzụlite. Ihe ndị a bụ:
Onye ọrụ nke gụnyere IMS ($ 350)
Enterprise ($ 475) na nke a, ị nwere ike ịgụ ma dee geometries nke dị na Oracle, SQL Server 2008.
Universal ($ 650) Nke a bụ Enterprise na geocoding, bussiness na n'elu ihe mkpofu ngwaọrụ
Ultimate ($ 950) nke a nwere ike ịṅụ sịga dịka ịmepụta ihe gbasara oghere ma ọ bụ hazie ihe dịka ọ nwere onye nchịkọta data.
Akara ukwu maka ndị mmepe bụ ikikere oge ojiri nwere ike site na $ 120, nke a na-eme ngwa nwere ike ịba uru iji resell.
Ndị a kpọtụrụ aha n'okpuru adịghị enye ọrụ multifonctional dị ka ndị gara aga, ma Microsoft na-akpọ ha dị ka ihe kwekọrọ na SQL Server 2008.
AWhere, Inc, bụ ụlọ ọrụ nyocha na mpaghara GIS, nke doro anya na ọ kwadoro ihu ahịa ọgụgụ isi, na-akwalite ngwaahịa ya AWare ngwa ngwa nkewa. Ọ na-arụ ọrụ n'okpuru mgbagha yiri Manifold, na map ndị ahụ adịghị adị na raw, mana na nchekwa data na ihe ọ na-eme bụ ihe nnọchi anya dị egwu nke na-ebute n'ụdị maapụ. Ọ nwere ndakọrịta na ụdị dị iche iche na Virtual Earth.
Ngwọta IDV na-enye ntinye akwara Ngosipụta Fusion Anya, bụ nke a na-arụ ọrụ maka ọrụ weebụ na usoro GIS nke ndị ọrụ nke ọrụ ndị a nwere ike ịmepụta ngwaahịa nwere ike ịmepụta ma na ọkwa, nyocha na netwọk mmekọrịta.
BCS bụ a technology ọrụ ụlọ ọrụ nke dịworo kemgbe 1978 na ya ngwaahịa GISTXten ukwuu haziri maka na-enye data njikarịcha ike, nke mere na mgbagwoju search Filiks, na ọrụ ma ọ bụ na usoro nwere ike mfe n'ihi na mma arụmọrụ.
Sistemụ IntraGIS na-akwalite ngwaahịa IntraGIS, bụ onye nghazi ya maka echiche ha kpọrọ Layer Server na-achọ ịhazi njikwa data na, na ụkpụrụ OCG, na-amata ụdị faịlụ dị iche iche na isi mmalite data, gụnyere formatfiles, dwg, tabular and image formats na ha abụọ intranet dị ka weebụ. Dị ka nkwa ya si dị, ọ bụ ngwá ọrụ maka ndị na-abụghị GIS ndị ọrụ chọrọ ịhụ nsonaazụ nke data iji mee mkpebi.
Ọ BỤ AKA
IS Consulting's (ISC) na-akwalite ngwaahịa akpọrọ MapDotNet Server, nke na-enye gị ohere iwulite n'ụzọ dị mma maka ngwa weebụ maka ngosipụta, nyocha na okike nke data gbasara ohere. Ọ nwere SDK nke ndị mmepe nwere ike iji mepụta ngwa ndị nwere ike ịba ụba, dakọtara na Virtual Erth na Silver Light.
Ha bụ ndị okike nke FME nke bụ ọrụ na-enye gị ohere ịgụ na ide data gbasara ohere, yana ịkwaga, gbanwee ma jikọta n'etiti 190 CAD, GIS na raster formats. Ha na-ahụ na enwere ike ịme ọtụtụ ihe na-enweghị mmemme.
SpatialDB Advisor na-enye ọzụzụ na nkwado na ahịa SQL Spatial ahịa, tumadi na:
Nwube na nhazi nke data, ma nhazi na akwụkwọ nke mmepe, dịka ntọghata, mwepụ, akwụkwọ ozi, imewe, koodu T-SQL, njikarịcha na mmejuputa nke Ụlọ Ahịa Data.
Ọzụzụ na nduzi na nhazi nke dataset
Mmezu nke ihe omumu ROI site na mmegharia nke ihe omumu sayensi di ugbu a maka mkpa ego.
SpatialPoint na-enyere ndị otu aka iji ozi gbasara ohere iji belata mmefu site na ịme ka usoro dị mfe. Ọpụrụiche ya bụ ahịrị Microsoft gụnyere Virtual Earht, MapPoint na n'ezie SQL Server 2008. SpatialPoint's Atlas teknụzụ na-enye ohere ngosi ihe ngosi nke data dị mgbagwoju anya sitere na nyiwe ndị a kpọtụrụ aha na mbụ. Ha na-enyekwa usoro mmejuputa iwu na mkpa ụfọdụ.
Anyị ga-ekpe na atụmanya nke ihe na-eme na ndị ọzọ ụdị na SQL Server ka ekwughị n'etiti ya mmekọ dakọtara na 2008 version, dị ka AutoCAD map3DBentley Geographics, Geomedia na ndị ọzọ, na ọ bụ ezie na ha bụ isi na-elekwasị anya bụ geoengineering ha na-eme ha earwigs nke akụkụ GIS.Actualizacion:
TatukGIS na-emekwa ihe ya ya na Space Spatial
Previous Post«Previous ESRI MapMachine, map ndị a na-ahụ maka ịntanetị
Next Post Zipu ma zigara Google EarthNext »